Faran’ny herinandro DANIELA na fiafaran 2015 END 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Tamin’ny 13 Septambra 2015 ny Fiangonana dia tsy mba noravana sy i Jesoa Kristy dia tsy niverina tany an-tany, na tamin’ny 14 na 15 Septambra 2015!
Inona no nitranga!
Mba hahatakarana, raisontsika ny fandalinana ny fotoana farany nanazava tao amin’ny lahatsoratra bilaogy teo aloha.
Ho antsika Kristianina, ny tamin’ny herinandro lasa ny Daniela dia ny fito taona izay tapitra amin’ny farany ny fotoana, araka izay an’i Jesosy Kristy, dia hiverina ho any an-tany mba hitondra ny tany mandritra ny arivo taona mandra-Olona ny Fara Andro.
Nandritra izany vanim-potoana farany ny fito taona ho velona olombelona fahoriana. Ireo fahoriana tena ho fotoan-tsarotra, fa mahita ny sazy sy ny andro ny fahatezeran ‘Andriamanitra.
Ireo sazy ho miandalana noho ny fiverenan’i Jesosy Kristy dia ho toy ny fanaintainana ny fiterahana ary fantatsika fa ny fanaintainana sy ny sitrapony dia miha-mazava mandra-fiterahana.
Takatsika fa amin’ny farany fotoan-tsarotra indrindra amin’ny fiainana fotoana « ny olona » eto an-tany no ho andro farany talohan’ny ny fiverenan’i Jesosy Kristy.
Araka ny lahatsoratra teo aloha Nohazavaiko fa ny fotoana farany vao May 14, 1948 tamin’ny fotoana ny fananganana ny fanjakan’i Isiraely, satria ny fanaintainana rehetra nanomboka tamin’izany daty. Tantara no mba hampahatsiahy antsika sy manaporofo izany.
Iray jereo kely ny lasa tsy amim-pisalasalana mamela antsika mba hanasongadinana ny miharatsy ny olana ny maha-olombelona avy izany daty. Ireo olana, efa koa voalaza tao amin’ny lahatsoratra bilaogy tsirairay.
Mariho fa ny farany herinandro ara-Baiboly dia naminany tamin’ny anaran’i Daniela mpaminany 600 taona talohan’ny voalohany fiavian’i Jesoa Kristy sy tahaka ny tsy efa nahita izany ho tena teny ny fito taona dia tsy maintsy hamita ny farandro.
I hypothesized izay nanomboka 29 Septambra, 2008 miaraka amin’ny tsenam-fianjerana ao amin’ny Wall Street.
Dia mazava fa satria izany daty ny 29 Septambra 2008 ny faminaniana sy fampitandremana ara-Baiboly famantarana ny fiverenana amin’ny eto an-tany an’i Jesosy Kristy Tompontsika tanteraka amin’ny be dia be ny hery, magnitudes, ny hamafiny ary ny lehibe matetika.
Hitantsika avy izao famantarana maneran-fandringanana no niharatsy hatrany izany hatramin’ny daty ny 29 Septambra 2008 izay noforonina avy amin’ny New York Stock Exchange Price hirodana ny malaza -777.77 amin’ny fotoana marina ny fefy. Manasa anareo aho mba hamaky ny bokin’i Pierre Jovanović 777.
Amin’ny tsotra jereo kely ny lasa hitantsika toy ny avy ny datin’ny 29 Septambra, 2008 ny loza sy ny loza avy ny andro ka vao mainka niharatsy miavaka dalana rehetra tany ny planeta.
Toy izany koa isika, tsy afaka tsy miraharaha izany tsikelikely nanomboka teo izao tontolo izao mijaly ny fahaverezan’ny soatoavina kristianina, ny nampitombo haingana be ao amin’ny mahery fihetsika, sy ny fanombohan’ny iray tena ady atao amin’ny Islamista manohitra ny firenena kristianina.
Ankehitriny faramparan’ny 2015, mazava ho azy, dia mazava fa hatramin’ny 29 Septambra, 2008, fito taona nanomboka tamin’izay, ny olombelona velona fotoana tena sarotra. Tsy fandriampahalemana, fahantrana, herisetra sy ady no be dia be ny olona isan’andro.
Velona olombelona tena fotoan-tsarotra anisan’izany ny Etazonia sy Eoropa.
Afaka koa jereo kely ny lasa, mahita fa nanomboka tamin’ny 2012 dia misy tena amplification ny krizy rehetra, loza, loza, ny herisetra ary ny ady izay efa tonga izao tontolo izao ady multifaceted.
Eny tokoa, satria Martsa 2012 izao tontolo izao dia amin’ny ady. Amin’ny alalan’ny Atsinanana ary indrindra indrindra tao Syria fa ny miaramilan ‘firenena maro eo amin’izao tontolo izao miady.
Noho izany faharatsiana rehetra izao zava-misy dia famantarana sy ny fahatanterahan’ny faminanian’ny Baiboly, dia efa nanangana ny mety hisian’ny fiverenana ‘i Jesoa Kristy ho an’ny 14 View September 15, 2015.
Mazava ho azy fa tamin’ny herinandro lasa ny Daniela Nanomboka 29 Septambra 2008 ary vita tsara ny Septambra 29, 2015 …!
Kanefa efa rehetra nahita ny faran’ny Septambra 2015 fa mifanohitra amin’ny ny fanadihadiana, dia tsy i Jesosy Kristy sy ny Fiangonany niverina tsy mbola nesorina …!
Fa ny fahadisoam-panantenana eo amin’ny bilaogy rehetra mpamaky, fantatro ary hahatakatra tsaratsara kokoa fa hizara izany fahadisoam-panantenana!
Mazava ho azy araka izay efa fantatrareo aho fa tsy mba misy mpaminany ary tsy mbola nilaza ho.
Na izany aza, dia tsy ny maha-mpaminany, dia afaka milaza hery, ny fahavononana sy ny faharesen-dahatra fa ny fiverenan’i Jesosy Kristy raha ny marina tena akaiky.
Ity fanambarana ity dia vokatry ny fampisehoana hery, sakany, ny hamafiny ary matetika ny faminaniana ara-baiboly rehetra sy ny famantarana ny amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Izy ireo izany dia manjo tsy misy isalasalana, hery, maridrefy ary matetika kokoa hatramin’ny 29 Septambra, 2008.
Avy eo, toy ny tsirairay avy aminareo, dia nanontany tena ahoana no lazaina fa i Jesoa Kristy dia tsy mbola niverina eto an-tany, na dia eo aza ny zava-bita ny famantarana rehetra sy ny faminaniana, anisan’izany ny ady tamin’ny Atsinanana fa amin’ny rehetra Azo inoana dia ny ady Hara-magedona i Jesosy Kristy dia tsy maintsy maka amin’ny fiverenany.
Tena ratsy dia? Toa, fara fahakeliny, toa Eny! Izany ihany koa ny hisian’ny ara-dalàna satria Andriamanitra ihany no mahalala ny andro sy ny ora ny fiverenan’i Jesosy Kristy!
Ny olana atrehintsika tena aho raha diso, dia ny loza rehetra izay miaina eto an-tany amin’ny saha rehetra, dia na inona na inona akaikin’ny izay miandry antsika Izy rehefa fantatsika fa ny loza sy ny fanaintainana hahazo ratsy indray ary indray mandra-misy farany ny fiverenan’ny Jesosy Kristy Tompontsika!
Ary avy eo isika dia mahatakatra fa manana tena sy olana lehibe eto anatrehantsika.
Tahaka ny efa nanazava tao amin’ny lahatsoratra teo aloha, ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy dia afaka mitranga isan’andro hatramin’ny famantarana voalohany izay nitranga May 14, 1948 satria Andriamanitra dia afaka hanafohezany ny fijaliana sy ny fanaintainana.
Ny fe-potoana ho amin’ny faran’ny andro dia androm-piainany ny ambony indrindra ny taranaka teraka tamin’ny 1948 (May 14, 1948 maha, araka ny efa hitantsika, ny daty voalohany famantarana ny fotoana farany).
Izany dia mitondra antsika ho 2068 toy ny fiainana ny olona ambony indrindra dia 120 taona ao amin’ny Baiboly.
Fa nomena ny heriny, hery, ny habeny ary ny matetika ny famantarana nanambara zava-bita sy ny faminaniana ny amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy, isika dia tsy maintsy mahatakatra fa efa antomotra fiverenana io.
Fa avy eo, raha tsy diso aho, nahoana ny fahatarana …!
Taorian’ny fifanakalozan-kevitra sy ny fandalinana ny toe-javatra, dia mety ho hita fanazavana.
Ny eritreritra sy ny fanadihadiana dia mety koa hanampy amin’ny fanomezana fanazavana ho ny vaovao mikasika ny fakàna an-keriny ny 13 Septambra, 2015, atao amin’ny ny Rahalahy Claude IGNERSKI.
Ny Rahalahy Claude no nataony asa miavaka amin’ny asa telo be nanazava ny farandro. Manasa anao aho mba ho hitantsika.
Nijaly tsy ara-drariny ny tena lynching ny rahalahy sy anabavy miampanga azy ny maha-mpaminany sandoka.
Na izany aza anefa Mihevitra aho fa izy mbola amin’ny ampahany, satria na dia eo aza ny zava-misy tsy azo lavina fa ny Fiangonana dia tsy mba noravana Septambra 13, 2015 araka izay efa nikasa.
Aoka ny eritreritro mba hahatakatra,
Ny krizy ara-toekarena izay nanomboka 29 Septambra, 2008 toa mazava ho azy fa ny tany am-boalohany fahoriana, nomena ny tsenam-haringana avokoa ny Wall Street sy ny fahatanterahan’ny faminaniana ny famantarana sy ny fotoana farany izay nanaraka.
Fantatsika ireo fahoriana ireo mandritra ny fito taona ary nizara roa telo sy tapany tsirairay.
Fanontaniana voalohany aho nanontany tena:
Nahoana ny Baiboly no milaza indroa telo sy tapany?
Misy io indray fa ny tapany faharoa dia ho sarotra kokoa noho ny voalohany.
Mora kokoa ny milaza fa ny fanaintainana dia ho fito taona ny liam-pivoarana …!
Toy ny tsinontsinona ny voasoratra na inona na inona ao amin’ny Baiboly, izany fametrahana mazava tsara fiaviana roa telo taona sy tapany, ka misy antony voalaza ho toy izany.
Telo taona sy tapany taorian’ny 29 Septambra, 2008 dia mitondra antsika ny 29 Marsa 2012 sy ny tapany faharoa telo sy tapany sambatra mifarana Septambra 29, 2015.
Ny daty 29 Septambra, 2015 dia mety ho ny fe-potoana fotsiny ho anisan’ny ny Fiangonan’i Jesoa Kristy dia hesorina.
Fa ireo izay voafidy mba hitoetra eto an-tany, mandra-pahatongan’ny andro ny fakana an-keriny noho ny anjely ‘i Jesoa Kristy.
Tsarovy fa ny Baiboly milaza ao amin’ny Daniela 12 andininy faha-11:
« Avy ny fotoana ny fanatitra isan’andro dia hitsahatra, raha ny fahavetavetan’ny fandravana dia nametraka, 1.290 andro, dia handalo « .
Ny 1290 andro dia telo taona sy tapany, na 42 volana ny tapany faharoa fahoriana « fahoriana lehibe »
Ao amin’ny andininy faha-12 mivaky toy izao:
« Isaorana anie izany izay miandry sy hamita 1335 andro! «
Mino aho fa i Jesoa Kristy an-tsitrapo nandao ny voafidy mpikambana ao amin’ny fiangonana mba hiandry (toy ny ao amin’ny andininy faha-12 amin’ny toko faha-12 ny Daniela) eto an-tany mba ho atao fa ny 1335 andro.
Io zava-misy, raha tsy diso aho, roa volana sy 21 andro maro mba hanampy ho 29 Septambra 2015. Izany dia mitondra antsika hoDesambra 20, 2015 ho amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy izahay, niandry ny Septambra 2015.
Ny fiverenan’ny ara-nofo Jesosy Kristy Tompontsika tokony ialohavan’ny ny fanesorana ny sasany tamin’ny fiangonana.
Ny faharoa eritreritra:
Araka izay nolazaiko aloha kely ao amin’ny lahatsoratra, na inona na inona izay voasoratra ao amin’ny Baiboly, na inona na inona izany, raha ny fito taona farany dia mizara ho roa in-telo sy tapany dia tsy maintsy mahatakatra fa mety misy ny maty ny fotoana eo anelanelan’ny vanim-potoana roa telo sy tapany.
Amin’ny tranga izay ny tapany voalohany amin’ny telo taona sy tapany ho nomanina mifarana Martsa 29, 2012 fa ny faharoa manomboka lalao kely taty aoriana.
Izay tranga maro daty azo voafidy ho ny fanombohan’ny fahoriana lehibe.
Ao amin’ny andininy faha-11 amin’ny toko faha-12 ny Daniela
1) Ny daty ny fametraham-pialan’ny Papa Benoît XVI: Ny 28 Febroary, 2013
2) ny daty ny fanendrena ny Papa François: Ny 13 Martsa, 2013
Izaho koa hotananay fanintelony:
Iray izay ny Papa François mitarika ny Lalan’ny Hazofijaliana: Ny Zoma 29 Martsa, 2013.
Amin’ny tranga izay ny fiverenan’i Jesosy Kristy afaka handray toerana ao amin’ny tapany faharoa ny 2016 ary angamba ny tamin’ilay fotoana ny fankalazana ny Rosy Hashanah ny 03 sy Oktobra 4, 2016.
Ny fiverenan’i Jesoa Kristy dia tokony ho ialohavan’ny ny fanesorana ny sasany tamin’ny fiangonana.
Raha ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompo Miseho tara 2015 na tara 2016, dia afaka maminavina tena faly isika, satria ny halehiben’ny ny didim-pitsaran’Andriamanitra dia ho kely sarotra raha naharitra ela ny fiverenan’i bebe kokoa ara-potoana.
Fa tahaka ny tamin’ny fanaintainana, ny fahoriana ny olombelona dia tsy mety, hanohy sy hahazo ratsy ary indray mandra-ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Raha i Jesoa Kristy dia tsy mivoaka, dia mazava ho azy fa dia hijaly bebe kokoa!
Noho izany dia tena zava-dehibe ny mivavaka sy hivavaka indray ary indray mba hangataka an’Andriamanitra mba hanafohezany ny fahoriana sy ny fanaintainana avy hatrany mamela ny hiverina an-tany ny Tompo sy Mpanjaka, i Jesosy Kristy zanany lahy tokana.
Ny fotoana efa akaiky ny fanavotana fa raha tsy mbola ho avy ny andro maizina.
Afa-tsy vavaka, ny finoana sy ny fitiavana dia hanampy antsika amin’ny alalan’ny farany maizina.
Tandremo tsara jiro ny lelafo ny finoantsika.
Miareta tory sy mivavaha ho an’ny haingana fiverenan’ny Tompo sy Mpanjaka an’i Jesoa Kristy sy ho ny Hi ny fanahintsika.
Fiadanana, fitiavana sy fifaliana ao an trano ao amin’ny fiandrasana ny andro voatahy ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika.